ဗစ်တိုးရီးယား 4,47 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
သငျသညျခေတ်မီစက်ကိရိယာများမှ disc ကို၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ကတည်းက In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်နာလန်ထူလုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်သည့်အခါမကြာခဏပျမ်းမျှအသုံးပြုသူဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဖတ်နေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, အကဲဖြတ် device ကိုအခြေအနေ, ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားနှင့်အတူစမ်းသပ်မျက်နှာပြင်, မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများနှင့်အတူအလုပ်နှင့်ထို့ထက် ပို. : ကံကောင်းထောက်မစွာ, သက်သေပြချက်ဗစ်တိုးရီးယားအစီအစဉ်ကိုဘယ်မှာရရှိနိုင်ပါက Hard disk ကိုပြည့်စုံဆန်းစစ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ hard disk ကိုစမ်းသပ်ဖို့အခြားဖြေရှင်းနည်းများကိုတွေ့မြင်အကြံပြု
အခြေခံပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ devices များ
ဒါကြောင့်အပေါ်မော်ဒယ်အမှတ်တံဆိပ်, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, အရွယ်အစား, အပူချိန်, နှင့်: ပထမဦးဆုံး tab ကို Standart အားလုံးအဓိက hard disk ကို parameters တွေကိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အ«နိုင်ငံကူးလက်မှတ်»ကိုနှိပ်ပါ။
အရေးကြီး: Windows7ကိုသို့မဟုတ်နောက်မှပေါ်အပြေးလာသောအခါ, သင်ထားတဲ့စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်တစ်ဦး program ကို run ရမည်ဖြစ်သည်။
S.M.A.R.T. drive ကိုဒေတာ
အစီအစဉ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးအားလုံးကို drives တွေကို option ကိုများအတွက်စံ။ SMART ဒေတာ (1995 ကတည်းက) အားလုံးခေတ်သစ် disk ကို drives တွေကိုအပေါ် Self-စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ယင်းကိုဖတ်ရှုအခြေခံ attribute တွေအပြင်, ဗစ်တိုးရီးယား drive ကိုအသင်းပေးခြင်း, မဂ္ဂဇင်းစာရင်းဇယား SCT protocol ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ပိုပြီးရလဒ်များကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့သိတယ်။
ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း (ကကောင်းဖြစ်ရပါမည်), မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများ၏နံပါတ်လွှဲပြောင်း (ထွက်ရှိသော0င်ဖြစ်သင့်သည်), အပူချိန် (40 ဒီဂရီအထက်ဖြစ်ရပါမည်), မတည်မငြိမ်ကဏ္ဍများနှင့် uncorrectable အမှားများကိုရေတွက်: ဤ tab ကိုတွင်, သငျသညျအရေးကြီးသောဒေတာများရှိသည်။
Windows အတွက်ဗစ်တိုးရီးယားအရောင်းသွက်အားနည်း functional ဖြစ်စေခြင်း (hard disk ကိုအတူအလုပ်မဟုတ်ဘဲ API ကိုတဆင့်ထက်ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်အဖြစ်ကပို scan မှ DOS ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အခွင့်အလမ်း) ရှိပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကအရှည်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောကဏ္ဍများထွက်ရှာရန်, (တစ်ကောငျးကြိုးအတှကျအစားထိုး delete သို့မဟုတ် recover လုပ်ဖို့ကြိုးစား) မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍပြင်ပေးဖို့, ပေးထားသောမှတ်ဉာဏ်ကဏ္ဍတွင်စမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ startup အတွင်းစကင်ကိုသငျသညျ (ဒါကြောင့်အပေါ် antivirus ကို, browser နဲ့အပါအဝင်) အခြားပရိုဂရမ်ကို disable လုပ်ဖို့ချင်တယ်။
အလားအလာဖတ်လို့မရအောင်, အနီ - - မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများ, ကွန်ပျူတာပြီးသားကိုဖတ်ရှုသောရဲ့ contents မလိမ္မော်ရောင်: verification ပုံမှန်အားဖြင့်သူမကကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ဆဲလ်၏ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်နာရီအနည်းငယ်ကြာပါတယ်။ အဟောင်းကို disk ပေါ်မှ data တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အသစ်တစ်ခု drive ကိုများအတွက်စတိုးဆိုင်ကိုသွားရှိမရှိ, သို့မဟုတ်မ - စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
အန္တရာယ်အရှိဆုံးပေမယ့်အစီအစဉ်တစ်ရပ်မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်။ အကယ်. «ရေးထား», ထို့နောက်အပေါငျးတို့သမှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်မှတ်တမ်းတင်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်, သည်, ထိုဒေတာများကိုအစဉ်အမြဲဖျက်လိမ့်မည်။ ထားရန်ညာဘက်စစ်ဆေးမှုများ tab ကို DDD mode ကို Enable ကိုသင် Erase အတင်းကြောင့်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်စေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်စကင်ကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာနှင့်ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့ကဏ္ဍအားဖြင့်စာရင်းဇယားကိုကြည့်ပါ။
၏သင်တန်း, function ကိုသာအပိုဆောင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drives တွေကိုရည်ရွယ်သည်ကိုသင် operating system ကို run နေသောပေါ်မှ disk ကိုဖျက်ပစ်လို့မရပါဘူး။
ပညာရှင်များအဘို့စံပြကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို, ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှု drive ကိုအဘို့အပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်,
အဘယ်သူမျှမရုရှားဘာသာစကား interface ကို;
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို (Third-party ကလူ 4,47 ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းလည်းမရှိပေမယ့်), 2008 ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် x64 စနစ်များနှင့်အတူဤအရပ်မှအဆိုပါအသေးစား bug တွေနှင့်သဟဇာတမပြတ်တောက်ခဲ့သည်;
Archaism အစီအစဉ်ကို - သိပ်အများကြီးသေးငယ်တဲ့ခလုတ်များနှင့်ထင်ရှားတဲ့;
လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ parameters တွေကို၏မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှုဖိုင်တွေရဲ့ပြီးပြည့်စုံသည်ပျက်စီးခြင်းဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်,
ထိုအချိန်တွင်ဗစ်တိုးရီးယားဟာသူတို့ရဲ့ဒေသများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုသို့ပြန်လည်နာလန်ထူနဲ့ HDD ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆာဂေးကာဇန်၏သခင်၏တဦးတည်းရေးသားခဲ့သည်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်အံ့မခန်းမဟုတ်ကြည့်ခြင်းနှင့်သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်ကခက်ခဲစေသည်စိတ်မကောင်းနီးပါးအဆမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ hard disk ကိုအစီအစဉ်ကိုဗစ်တိုးရီးယား Restoring CDBurnerXP Comfy ဖိုင်ဆယ်တင်ရေး HDD အပူချိန်
ဗစ်တိုးရီးယား - နိမ့်ဆုံးအဆင့်မှာဆိပ်ကမ်းကတဆင့်တိုက်ရိုက်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်များအတွက်ရေပန်းစားပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: The simple genius ofagood graphic. Tommy McCall (အောက်တိုဘာလ 2019).